Fandresena ho an’ireo sarimbavy mpianatra ao amin’ny Oniversiten’i Chulalongkorn tao Tailandy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Avrily 2020 14:18 GMT
Vakio amin'ny teny Esperanto , Ελληνικά, Español, bahasa Indonesia, Italiano, English
Jirapat Techakijvekin (faharoa avy aty ankavanana) tamin'izy nametraka fitarainana teo anivon'ny Kômisiôna mpandinika misahana ny fanavakavahana tsy rariny mifototra amin'ny mahalahy sy mahavavy. Sary sy maribolana avy amin'ny Prachatai
Ity lahatsoratra ity dia avy amin'ny Prachatai, tranonkalam-baovao tsy miankina ao Tailandy, ary naverina nozaraina ato amin'ny Global Voices ho ampahany amin'ny fifanarahana iray hifampizara votoaty.
Nanova ny fitsipika anatiny ihany nony farany ny Oniversiten'i Chulalongkorn, ilay Oniversitem-panjakana isan'ny tsara indrindra ao Tailandy, mikasika ny fanamiana ka mamela ireo mpianatra hiakanjo mifanaraka amin'ny maha-izy azy, taorianà fangatahana iray tamin'ny fiandohan'ity taona ity napetrak'ireo andiana mpianatra mba hanovàna izany ary nametraka koa fitoriana mpampianatra iray ao amin'ny Fakiolten'ny Fampianarana.
Fanambaràna iray avy amin'ny Oniversiten'i Chulalongkorn navoaka ny 7 Novambra no nilaza fa neken'ny Oniversite ny fanavaozana ny fitsipika anatiny mikasika ny fanamiana, izay maneho mazava fa “Ny mpianatra rehetra dia afaka manao ny fanamiana mifanaraka amin'ny maha izy azy voasoratra hatramin'ny nahaterahany na ny maha-sarindahy na sarimbavy azy ” izay ahafahan'ireo mpianatra miakanjo mifanaraka amin'izany any an-dakilasy, na rehefa fotoam-panadinana, na amin'ny lanonana maro samy hafa.
Talohan'io fanitsiana io, tsy nanana rafitra manokana natao ho an'ireo sarimbavy sy sarindahy mpianatra mba te-hiakanjo araka izay maha-lahy na maha-avy azy ny Oniversiten'i Chulalongkorn. Mila manao fangatahana manokana ireo mpianatra raha te-hiakanjo araka izay maha-izy azy izay mandritra ny fotoam-pizarana diplaoma, na hiankanjo araka izay maha izy azy ao ampianarana na koa mandritry ny fotoam-panadinana. Raha toa ka manome alalana ny mpianatra hanao ny akanjo araka ny maha-sarimbavy na sarindahy azy mandritry ny fotoam-pizarana diplaoma ny Oniversite, zara kosa raha ampamenoana taratasy toy izany izy ireo rehefa fotoam-pianarana na fotoam-panadinana. Sarotra ihany koa ny dingana aleha amin'ny fanaovana izany fangatahana izany, mitaky antontan-taratasy marobe, isan'izany ny taratasy avy amin'ny dokotera manambara fa “manana olana eo amin'ny fanekena ny maha-lahy na maha-vavy ”azy izy ireo. Matetika ihany koa tsy hain'ireo mpianatra akory hoe azo atao ny manao izany fangatahana izany na ny fomba fanaovana izany.
Na dia tsy hanasazy ireo mpampianatra , na hanery ireo sarimbavy mpianatra mba hitafy mifanaraka amin'izay nomena azy ireo teo am-pahaterahany, dia mbola miatrika fanarabiana fanavahana sy fankahalàna sarimbavy avy amin'ireo mpiasa ao ihany ireo sarimbavy, indrindra any amin'ireo fakiolte somary mbola ‘mitàna ny nentim-paharazana’, tahaka ny Fakiolten'ny Fampianarana, misy ireo mpianatra tena mbola rahonana handraisana fepetra noho ny fandikàna ireo fitsipika mifehy. Mety midika ho tsy fanenjehana ireo mpianatra sarimbavy ho tsy manaraka ny lalàna anatin'ny Oniversite intsony ny fanovàna ilay fitsipika ary tsy ilaina intsony ny mameno ireo antontan-taratasy momba ny fanamiana. Na izany aza, mety tsy hampitsahatra ny fanavakavahana isam-batan'olona izany.
Ny Janoary 2019, Jirapat Techakijvekin, mpianatra iray avy ao amin'ny Fakiolten'ny Fampianarana no nangataka fampiakarana ny raharaha ho eo anivon'ireo fahefana mpanantanteraka ao amin'ny Fakiolte, tamin'ny nanafoanana indray ny fahazahoany manao ny akanjo mitovy amin'ireo ankizy vavy mpianatra, ka nandidy azy hiakanjo toy ny lehilahy rehetra raha tsy izay dia iharan'ny sazy faratampony. Nilaza i Jirapat fa nametraka fangatahana ara-dalàna tao amin'ny Fakiolte izy tamin'ny Septambra 2017, ary ny Desambra tamin'io taona io ihany no nilazan'ny Fakiolte taminy fa nomena azy io alalana ion dia lnoavina indray ny 11 Janoary 2019.
Nilaza ihany koa i Jirapat fa niatrika fanehoan-kevitra feno fankahalàna avy amin'i Niran Sangsawat izy ny Novambra 2018. Nilaza taminy mantsy i Niran ny mba hiakanjoany toy ny lehilahy amin'ny fotoam-pampianarany manaraka, raha tsy izany tsy mahazo manatrika ny taranja ampianariny intsony. Nilazany ihany koa izy fa toy ny hoe adala izany sarimbavy izany, ary hoy izy taminy : “Efa zava-dehibe ny famelàna anareo hianatra ato fa tsy hoe alefa any amin'ny trano fitaizana adala.” Mbola nolazainy tamin'i Jirapat ihany koa fa ho hangatahiny ny Fakiolte hamerina handinika tsara ny momba azy, taorian'izay moa dia nihemotra tamin'ny fanapahankeviny momba ilay fangatahana nataony indray ny Fakiolte.
Mpianatra maro hafa ihany koa no naneho ny heviny tao amin'ny media sosialy, nanambara fa ireo andiam-pianatr'i Niran tanatin'ny 35 taona lasa koa dia tena niharan'ny fanavakavahana avy amin'io mpampianatra io. Nanomboka ilay hetsika Change.org ihany koa ilay mpianatra iraymafana fo , Netiwit Chotiphatphaisal, nanao antso ho an'ny Fakiolten'ny Fampianarana handray fepetra momba an'i Niran. Na izany aza, tsy mbola mazava raha handray fepetra na tsia ny Fakiolte.
Ny 29 Janoary 2019, nandeha tany amin'ny Departemanta misahana ny Raharaham-Behivavy sy Fampiroboroboana ny Ankohonana (DWF) i Jirapat sy mpianatra roa hafa nameno taratasy fitarainana tao amin'ny komity misahana ny resaka fanavakavahana mifototra amin'ny mahalahy sy mahavavy. Araky ny andalana faha-18 amin'ny lalàna Tailandey momba ny fitovian-jo ara-pananahana, ireo rehetra mahatsapa fa mizaka fanavakavahana ara-pananahana dia afaka mametraka taratasy fitarainana ao amin'ilay Komity Misahana ny resaka Fanavakavahana mifototra amin'ny mahalahy na mahavavy, izay manana fahefana hanao ny hetsika sahaza ho fisorohana ny fanavakavahana, ary manao izay hisian'ny fanonerana sy hahitana vahaolana ho an'ireo niharan'izany.
Taratasy iray tamin'ny 18 Febroary 2019 avy amin'ny Oniversite ho an'i Jirapat no nilaza fa, raha toa ny Biraon'ny raharahan'ny Fampianarana ao amin'ny Oniversite ka mbola eo ampandinihina ny fanamboarana ilay fitsipika mifehy ny fanamiana mba hanaraka ny lalàna mifehy ny fitovian-jo, dia nanome alalana an'i Jirapat kosa izy ireo mba hanaovany akanjom-behivavy. Nivoaka ny 11 Novambra 2019 ihany ilay fanovàna ny fitsipika anatiny mikasika ny fanamiana.
Miatrika isanandro trangana fanavakavahana sy fitanilàna ny vondrompiarahamonina LGBTQ+ Tailandey, miaina faneriterena be ny ankamaroany mba tsy hiteraka henatra ho an'ny fianakaviana, raha ireo manampahefana misahana ny fizahantany kosa mampahafantatra an'i Tailandy ho toerana tokony ho aleha mankato ny sarimbavy sy sarindahy, ka nanao ilay hetsika hoe “Go Thai, Be Free”(Alefa Tai, Hiaino ny fahalalahana) mihitsy hisarihana ireo mpizaha tany. Bangkok aza moa dia nantsoina mihitsy hoe “renivohitry ny sarimbavy ao Azia” ary fantatra amin'ny fetin'ireo sarimbaviny isak'alina, ireo sarimbavy mpanjakavavin'ny filatroina, ary ireo fandidiana fanovàna ny maha-lahy na ny maha-vavy. Na izany aza anefa, na nisy aza ny Gender Equality Act ny taona 2015 (Lalàna momba ny fitovian'ny lahy sy ny vavy / miralenta), mbola vitsy ny fanohanana ofisialy azon'ireo vondrompiarahamonina LGBTQ+ .
Na tsy heloka bevava intsony amin'ny lalàna ao Tailandy aza ny maha-sarimbavy na ny maha-sarindahy , mbola misedra fanavakavahana foana ihany ny vondrompiarahamonina LGBTQ+ any amin'ny toeram-piasany, ny toeram-pianarana, ary any an-tranony avy. Maro ny tatitra mikasika ireo LGBTQ+ nolavina ny fisondrotany na voaroaka tamin'ny asany noho ny famborahana ny maha-sarimbavy na sarindahy azy, na koa hanaovana fanontaniana tsy mifanaraka loatra mandritra ny resadresaka nifanaovana taminy talohan'ny nandraisana azy. Miaritra fandrabirabiana sy fampitahorana avy amin'ny mpampianatra sy ireo mpiray monina aminy ireo LGBTQ+ mpianatra amin'ny resaka fisafidianana ny maha izy azy sy ny maha-sarimbavy na sarindahy azy. Sarotra ho an'ireo sarimbavy voafonja ihany koa ny mahazo ny fikarakaràna hormonaly, ary maro amin'izy ireo no iharan'ilay antsoin'ny maro hoe “fanagadrana indroa” rehefa tazonina any aminà fairitra iray mitokana ao anatin'ny fonja natao ho an'ny lehilahy ireo vehivavy tsy mbola vita fandidiana hanovàna ny taovam-pananahany.
Tsy hita ao anaty lalàna ao Thailandy ny fanekena ny sarimbavy na ny sarindahy amin'izao fotoana izao, ka manakana ireo olona nanova fananahana tsy ho afaka manova ny fiainan-dry zareo. Tsy misy ihany koa ny lalàna momba fitoviana amin'ny resaka fanambadiana, midika izany fa tsy afaka ny hifanambady ara-dalàna ny samy lahy na ny samy vavy, izay mitondra any aminà olana hafa, toy ny tsy fahazoana manangana zaza na ny tsy fahafahana mandray fanapahankevitra ara-medikaly amin'ny anaran'ilay olona miaraka aminy.
Ny 22 Aogositra, nifidy ny tsy hanohana ilay tolodalàna hametrahana Komity maharitra momba ny zon'ireo LGBTQ+ ihany koa ny Parlemanta. Ho solon'izay, ny zon'ireo LGBTQ+dia ho atsofoka ao anatin'ilay Komity maharitra misahana ny ankizy, ny tanora, ny vehivavy, ny zokiolona, ny olona sembana ara-batana ary ireo vondrona ara-poko.